Enwere m ike ịnweta akara azụ PR dị elu site na ụlọ ọrụ ire ere?
Taa, ọ nwere ike iyi ihe egwu maka ọtụtụ SEO na ndị mmepe weebụ ọkachamara mgbe ọ na-abịa na mkparịta ụka na-emekarị banyere àgwà nkwado azụ na njikarịcha ọchụchọ. Ntak-a? N'ihi na ọrụ ọtụtụ mgbe iji nweta nkwado azụmaahịa PR dị elu n'esepụghị mkpokọta weebụ ma ọ bụ blog bụ ọrụ siri ike. Otutu ihe, ihe mgbaru ọsọ nke SEO bu ime ka onu ogugu CTR di, gbasaa okporo onu ahia, nakwa ka ndi mmadu megharia nke mkpokọta.Ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta akwaazụ azụ PR dị elu site na ụlọ ahịa na-ere ahịa - enwere ọtụtụ n'ime ụmụ okorobịa ndị a na-akwagharị "ọrụ" ha na Web - ebe a bụ ụfọdụ ihe ọmụma dị omimi banyere ụlọ ọrụ ụgwọ ụgwọ.Ihe bụ na Google nwere ike ịchọpụta ihe ọ bụla na-enyo enyo na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog (i. e. , nnukwu ndị na-agba mbọ na azụmaahịa azụmaahịa, jiri arịlịka zoro ezo, ọdịnaya nke spammy, na ụzọ ọ bụla ọzọ ma ọ bụ atụmatụ aghụghọ nke Black Hat na Gray-Hat SEO). N'ileba anya n'ọnọdụ kachasị njọ mgbe ị nwetara akwaazụ azụ PR dị elu site na ndị na-enyeghị ya (i. e. , akwụkwọ nduzi dị ala, akwụkwọ ndebanye aha ngwa ngwa, jikọta ugbo ma jikọta wiil - a. k. a. njikọ njikọta) - ihe niile nwere ike imeri na mbibi. Echere m na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike machibidoro ntanetị n'ịntanetị ozugbo na ruo mgbe ebighi ebi. Ya mere, ịtụle ụdị ihe ize ndụ dị otú ahụ dị n'okpuru ebe a ga-abịa ihe niile ị kwesịrị ịma banyere ụgwọ azụ azụ, ụgwọ bụ isi nke ikpe mara na otu esi zere ha kachasị mma, ma ọ dịkarịa ala ihe ndị na-emekarị.
Isi Ụdị nke ntụziaka Penalties
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị chee ihu - ụfọdụ nhụjuanya dị elu nwere ike imebi naanị akụkụ nke okporo ụzọ weebụ gị, na ihe ndị ọzọ a na-atachi ha iwu na saịtị niile. N'ịtụle mmebi iwu kachasị mma na ịzụta ma ọ bụ ire azụ, enwere ụdị ikpe dị iche iche dị iche iche dị iche iche - esemokwu ihu abụọ, ntaramahụhụ saịtị, na mkpochapụ zuru oke.
Nkọwa Anya - na-anọchi anya nkwụsị aka na-akwọ weebụsaịtị ma ọ bụ bipụta ihe nchọta. Ọ na-emekarị mgbe Google natara ọrụ dị iche iche nke njirimara a na-ahụ anya, nke na-ejikarị ịmepụta ọtụtụ mkpụrụokwu na keyphrases - dịka iji gbapụtakwu okporo ụzọ, na-enweghị na-anapụta ezigbo uru na ọdịnaya nke ọdịnaya.
Nhụjuanya Obere Site - Nke ahụ ga-abụ mmetụta dị oke njọ na nhụsianya siri ike. Site n'ikike ị nwere ike belata ruo ọkara nke okporo ụzọ weebụ gị, a na-ejikarị ụdị ntaramahụhụ a na-akwụ ụgwọ mgbe ọ na-abịa n'iji akara azụ azụ Grey-Hat, dịka ọmụmaatụ na arịlịka zoro ezoro ezo, dịka ihe na-adịghị mkpa ma ọ bụ ọbụna ọbụghị ọdịnaya zuru oke dịka ọgwụ, ịkwa iko ma ọ bụ ịgba chaa chaa. Ọ bụrụ na ị na-emeso onye na-ere ahịa na-abaghị uru na-agba ụgwọ iji nweta nnukwu backlinks PR na mkpokọta gị - ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge - ọ bụ oge iji nwee ụjọ. Dị ka ị ga-esi na-ebuli ọkọlọtọ ọkọlọtọ na Google ma rịọ maka ụgwọ.
Kpochapu zuru oke - na-ekwu maka onwe ya. Echere m na ịga ahịa azụ azụ nwere ike ime ka ihe ka njọ. M na-ekwu ihe omume kachasị njọ mgbe mkpokọta weebụ gị ma ọ bụ blog na-enyo enyo na ị na-emebiga ihe ókè n'ụzọ na-ezighị ezi na njikọ aghụghọ ụlọ ọrụ ma ọ bụ na-azụ ahịa - ma na-emekarị ka ọ ghara inweta nchịkọta ọchụchọ. Ọtụtụ mgbe, nhụjuanya dị otú a na-akpata ma ọ bụ na-ere ahịa "ụlọ ọrụ" dị ala, na "ndị ahịa ha" Source .